हाम्रो मनपर्ने नृत्य चलचित्र को केहि! | फ्रेड Astaire
हाम्रो मनपर्ने नृत्य चलचित्र को केहि!
जब तपाइँ महान नर्तकहरु को विशेषता फिल्महरु को बारे मा सोच्नुहुन्छ, मन मा आउँछ कि पहिलो नाम फ्रेड Astaire हो, फ्रेड Astaire Franchised नृत्य स्टुडियो को संस्थापक।
अक्सर उपहार अदरक रोजर्स संग साझेदारी, फ्रेड Astaire शानदार चाल, चिकनी परिष्कार र ठूलो पर्दामा रोमान्स ल्याए। र, निस्सन्देह, अदरक रोजर्सले उस्तै गरे - पछाडि, उच्च ऊँची एड़ी मा।
हामी पतन र जाडो को मौसम मा तल hunker र टिभी मा केहि महसुस राम्रो फिल्महरु को लागी तल, हामी स्वाभाविक रूप देखि यहाँ केहि उत्कृष्ट नाच हाइलाइट गर्न को लागी विशेष गरी मायालु फ्रेड Astaire द्वारा सुझाव गर्न को लागी इच्छुक छौं।
हामी एक मिनेट को लागी उत्तम दर्जेको नाइट क्लबहरु र सुरुचिपूर्ण औपचारिक पोशाक को ती अद्भुत दिनहरु मा फिर्ता गरौं को रूप मा हामी ट्यून मा…
हास्यास्पद अनुहार (१ 1957 ५): एक पसल क्लर्क (Audrey Hepburn) एक अचानक फोटो शूट को दौरान अचानक मोडलि star तारा को रूप मा उदय हुन्छ। फ्रेड Astaire फोटोग्राफर डिक Avery, जो चित्रहरु मध्ये एक को पृष्ठभूमि मा Audrey Hepburn पत्ता लगाउँछन् खेल्छन्।
शीर्ष टोपी (१ 1935 ३५): जिन्जर रोजर्स संग पहिलो Astaire फिल्म। फ्रेड Astaire लन्डन मा एक होटल को कोठा मा एक रात ढिलो नृत्य कदम मा काम गरीरहेको छ र शोर तल को कोठा मा महिला (जिन्जर रोजर्स) लाई जगाउँछ। उनी उसलाई सामना र अन्ततः रोमान्स (र भ्रम र नृत्य) उदय।
छुट्टी इन (1942): एक होटल मा मात्र छुट्टिहरु को लागी खुला छ, एक गायक (बिंग Crosby) र नर्तक (फ्रेड Astaire) एक नौसिखिया कलाकार (Marjorie रेनोल्ड्स) को मुटु को लागी प्रतिस्पर्धा।
शनिवार रात ज्वरो (१ 1977)): एक ब्रुकलिन, NY सडकवार रंग विक्रेता (जोन Travolta) डिस्को युग को समयमा एक स्थानीय किंवदंती बन्छ। यदि तपाइँ लाइन नृत्य को आनन्द लिनुहुन्छ, त्यहाँ धेरै देख्न को लागी, एक बढ्दो नृत्य स्टार को रूप मा Travolta को bravura प्रदर्शन संगै छ।
डर्टी डान्सिंग (१ 1987): रिसोर्ट अतिथि फ्रान्सिस "बेबी" Houseman नृत्य मा एक ग्रीष्मकालीन शिक्षा र जोनी (प्याट्रिक Swayze), एक होटल वेटर बाट प्रेम प्राप्त हुन्छ। होटल र स्टाफ सबै नृत्य को रूप मा "मेरो जीवन को समय" को साथ महान अन्त्य।
Singin 'in the Rain (1952): १ 1920 २० को दशकमा हलिउड मौन तस्वीरहरु बाट "टकीज" मा परिवर्तन हुँदैछ र ताराहरु - जीन केली, डोनाल्ड ओ'कनर र डेबी रेनोल्ड्स - यो सबै भन्दा राम्रो संग सम्भव छ। शीर्षक गीत मा केली को प्रदर्शन को बारे मा राम्रो संग यो हुन्छ।
सानो कर्नल (1935): शर्ली मन्दिर र ट्याप स्टार बिल "Bojangles" रोबिन्सन फिल्महरु को एक श्रृंखला बनायो। यो एक प्रतिष्ठित दृश्य जहाँ उनीहरु सीढी को एक उडान मा नृत्य शामिल छ। शर्ली मन्दिर समय मा 7, रोबिन्सन 57 थियो।
त्यहाँ धेरै धेरै महान नृत्य फिल्महरु छन् - कुनै सूची ती सबै समावेश गर्न सक्दछ। हामी सिफारिस गर्दछौं Flashdance (1983), Footloose (1984), प्रगती गर (2006) र बिली इलियट (२०००) साथै माथी माथी।
यी महान चलचित्रहरु मा नृत्य तपाइँ लाई प्रेरित गरौं। त्यो आत्मविश्वास को केहि ल्याउनुहोस् र फ्रेड Astaire नृत्य स्टुडियोहरु संग स्पार्क, र नृत्य भुइँमा आफ्नो जीवन लाई उज्यालो।